Ọkachamara Semalt na-akọwapụta Ngwaọrụ Mgbakwunye Weebụ
Maka ụfọdụ ndị mmepe weebụ, ọ dị mkpa iji rụọ ọrụ ụfọdụ nchịkọta weebụ . Ha na-enyere mmadụ aka iwepụta data na ebe nrụọrụ weebụ site na saịtị ma debe ya na ebe dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ na diski ike nkịtị. Ndị mmadụ na-akpọ nhọrọ ndị a na-ewu ewu nke ịchekwaa ibe weebụ site na ibe weebụ site na iji ihe nchọgharị. Otú ọ dị, ụfọdụ weebụsaịtị nwere ọtụtụ peeji nke. Mmadụ nwere ike iji ngwa iji wepu weebụ iji zọpụta ọtụtụ peeji nke na-aga. Imirikiti ngwá ọrụ ndị a na-enye ọrụ akpaaka dị ka ịhazi usoro oge na-aga n'ihu. Ngwaọrụ ndị a na-arụ ọrụ dịka ihe nchọgharị weebụ, ma ọ bụghị n'ihi na ha bụ mfe ntanetị weebụ nke na-aga na ibe weebụ ma na-anakọta data dị mkpa.
N'isiokwu a SEO, ụfọdụ n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị emetụta ya bụ:
Nke a bụ ngwa ihe ntinye weebụ nke nwere ike ibudata ozi weebụsaịtị. Onye ọrụ ahụ nwere uru nke dị mfe iji interface nke na-abịa na ọtụtụ atụmatụ. Ndị na-enweghị ma ọ bụ obere usoro mmemme nwere ike iji Octoparse iji mee ka nchịkọta data sitere na URL.
Onye nchịkọta weebụ nwere ike ịchọ inweta data site na invoices, receipts, na emails. N'ọnọdụ a niile, Hubdoc nwere ike ịdọrọ ma chịkọta ozi a gaa na ngalaba a chọrọ. Site ebe a, ngwá ọrụ a ga-enwe ike ịchekwa data na usoro a haziri aha maka nchịkọta n'ọdịnihu.
Maka ndị ọrụ Windows, WinAutomation na-eme ka ọ dị mfe maka ndị mmadụ ịzụlite ọdịnaya maka weebụsaịtị ha. Ọ na-eme ka ndị ọrụ Windows nweta ngwá ọrụ na-akpaghị aka nke nwere ike ịchekwa ma mepụta ndekọ nke ahaziri
Mgbe ị na-atụle ihe nchọgharị weebụ na-ewepụta, Ụlọ Ọrụ Data Archive na-enyere ndị ọrụ aka wepụ data site na weebụsaịtị weebụ. site na ụlọ ọgwụ na ụgbọ ala na ụlọ ọrụ dọkịta maka ndị ọrụ chọrọ ọrụ ETL, Data Data Archiver na-enyere aka ịmepụta nchịkọta data site na URL nke ahụike maka ojiji na usoro ha.
Ngwaọrụ a na-enye mfe Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ihe ọmụma weebụ, ị ga-enwe ike ịchọta data na ebe nrụọrụ weebụ ma chekwaa ya. Diggernaut nwere interface njikwa dị mfe dịka dragọn dị mfe ma tụlee atụmatụ.
Maka ndị ọrụ ndị chọrọ ịmepụta ahịa, ị nwere ike nweta data ziri ezi na iji ngwaọrụ ndị dị ka Salestools.io. Ngwá ọrụ a nwere nhọrọ nke ịbata data nke onye na-asọ asọmpi. Ọzọkwa, onye nwere ike nwee ike ịmekọrịta na atụmatụ ahịa ahịa nke ụlọ ahịa ahụ.
N'ihe ụfọdụ ọ chọrọ, API nwere ike ịbụ ihe nkwekọrịta. N'ọnọdụ ndị a, enwere ike ịmegharị data n'etiti oge nyocha ma ọ bụ ntaneti chọrọ site na iji ngwá ọrụ data.
Ulo oru nwere ike iji Datahut iji kwadebe iji ọdịnaya azụmahịa. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịchọ ịhazi nyocha azụmahịa. Datahut bụ ngwá ọrụ ntinye weebụ nke na-eme ka ndị ọrụ nata data weebụ na flash. Ndị na-eme ntọala e-azụmahịa pụrụ irite uru site na ngwa a Source .